Kushamisika kwekupedzisira kwegore: US-China hukama | Ehupfumi Zvemari
Kushamisika kwekupedzisira kwegore: US-China hukama
Kana zvese zvikaita senge zvairatidza kuti taive tave kuda kupinda mumutambo wechivanhu wemazororo eKisimusi, takawana chidimbu chenhau icho kubva zvino zvichienda mberi chingave chinokwezva pamisika yemari. Icho hachisi chimwe kunze kwekukanganisa kwakakomba pakati pehukama pakati penyika mbiri dzakasimba kwazvo hupfumi pasi rose: China neAmerica. Kusvika padanho rekuda kukanganisa zvikamu zvekupedzisira zvekutengesa mumisika yemasheya. Kunyangwe pazasi pehukuru hwakasimba zvichienderana neiyo shanduko yemisika yemari panguva ino yekupedzisira yegore iri kuda kupera.
Kune rimwe divi, chiitiko ichi chakawedzeredzwa nenyaya yekuti hupfumi hweAsia huri kusimuka hwasimudza kusagadzikana maererano nekusungwa kuCanada kweCFO yekambani inoenderana nehunyanzvi Huawei, Meng Wanzhou. Hazvishamisi kuti zvakanzi zvinofungidzirwa kuti zvakabiridzira kutyora masanctions akachengetedzwa neUnited States kuIran. Nechekare muvhiki yapfuura misika yakaendeswa nezvakataurwa nechinhanho ichi pahukama hwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi.
Hazvishamisi kuti nhau idzi dzakanganisa musika wemasheya nenzira inoshamisa uye pamusoro pezvimwe zvematongerwo enyika uye kunyange zvemagariro. Mupfungwa yekuti muzvinabhizimusi Weng akazviratidza zvakare Muvhuro uno mudare muguta reCanada nechinangwa chekuona kuti anopihwa here kana kwete. bail. Nekuti zvichibva pachisarudzo ichi, equities dzinogona kutora maitiro kana imwe pamagumo akaoma egore kune vashoma nepakati varimi. Iko vazhinji vavo vava kutodzora zvinzvimbo zvavo mumusika wemari uyu.
1 Hukama pakati peUSA neChina
2 Ivo vanoedza kusunungura kusagadzikana
3 Chengetedzo dzakanyanya kubatwa pamusika wekutengesa
4 Maitiro ekupotera mumusika wemasheya?
5 Matipi ekuita pamusika wekutengesa
Hukama pakati peUSA neChina
Zvisinei, purezidhendi weUnited States of America, achiedza kudzikamisa vamiririri nevamiriri vezvemari, akataura kuvatori venhau kuti hukama hwekutengeserana pakati penyika mbiri dzine simba dzehupfumi hwenyika. Asi chokwadi ndechekuti chokwadi ndechekuti misika yemari haina kubhadhara zvakanyanya kune izvi nekuda kwekuti vakashanduka sei mumisangano ichangopfuura yekutengesa. Mupfungwa iyi, indekisi yakasarudzwa yemari dzeSpain, Ibex 35, yasara kutenderera 3% muvhiki rapfuura. Nenjodzi yekudonha inogona kukurudzirwa.
Mune imwe tsinga, chinhu chimwe ndechechokwadi uye ndiko kuti kusungwa kweuyu bhizinesi kwakawedzera huni kumoto mukukanganisa kwehukama pakati peWashington neBeijing. Izvo zvatova, ivo vakakuvadzwa zvakanyanya neiyo bhizinesi zvido yeimwe yeaya marudzi uye ane kusagadzikana mumisika yemari mukati memazuva ano ekupedzisira e2018. Kunyangwe hazvo zvinhu zvichitowedzera kushata nekuda kwekunzwisisa kwenyaya iyi inotaurwa nevazhinji vevamiriri
Ivo vanoedza kusunungura kusagadzikana
Uye hatifanirwe kukanganwa kuti iyo Beijing hurumende urikuyedza kudzikisira ichi chokwadi kuti inogona kunge iine hupamhi pamusika wemari pane zvavangafunga nezvevamwe varimari vadiki nepakati Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakakosha maonero nemaitiro, zvikamu kana indices dzepasi rose. Iko kupi makambani eetekinoroji ari iwo akanyanya kunetsekana nekukudziridza kudzikira mumutengo wemitengo yavo. Sezvazvakaitika mumazuva apfuura emusika wekutengesa, kunyanya muUnited States stock market.
Kune rimwe divi, equities dzakaona kudonha kukuru mumakore maviri. Kunyanya, kubvira zviitiko zvakatungamira kune iyo Brexit muGreat Britain. Nechiitiko chakajeka kwazvo chekutengesa pakutenga, asi mune ino kesi vakwezva kutariswa kwehunyanzvi hwavo hwakaratidzwa. Chinhu chakakanganisa mazhinji emazano akange achiiswa nevazhinji vevatengesi vevatengesi panguva ino. Kusvika padanho rekuti vakatoita akati wandei mumazuva ano masisitimu avo ekuti mari ibatsire kubva panguva chaidzo idzi
Chengetedzo dzakanyanya kubatwa pamusika wekutengesa
Izvo hazvigone kukanganwika kuti hukama hwekutengesa pakati penyika mbiri idzi hwakakosha kune a zvakanaka Kurume yemisika yepasi rose yemari. Nekuti zvirokwazvo, ese matunhu ari kutarisisa kune ichi chakakosha chokwadi mumisika yemasheya uye pamusoro pedzimwe nyaya dzehupfumi nedzekutengesa. Pakati pavo vese, chimwe chezvikamu chakanyanya kubatwa nehukama hwekutengesa iri zviri pachena tekinoroji. Hunhu hwavo ndidzo dzakanyanya kurangwa. Nekuderedzwa mumitengo yavo inosvika ku5% kana kunyanyisa zvakanyanya.
Chikamu chebhengi ndechimwe chezvakakura zvakakanganiswa neichi chiitiko chitsva chakapihwa neChina neUnited States sezvo mapoka mazhinji emari akapomera mafambiro aya mumisika yemari. Kunyanya, munyika medu kukosha kwehukuru hwe Santander, BBVA kana Sabadell ivo vakatungamira kudonha musarudzo yemari yenyika, nemadonhwe mumutengo wavo pamusoro pe2%. Mune chikamu chakange chakatonyudzwa mune mamwe matambudziko ehukosha hwakakosha, senge iyo yakatorwa kubva kuBrexit.
Maitiro ekupotera mumusika wemasheya?
Tatarisana nemamiriro ezvinhu akaomarara aya, varimi vazhinji vari kufunga nezvematunhu anokwanisa kuita sekupotera mune ino mamiriro akabuda panguva ino chaiyo. Zvakanaka, pane chikamu chiri kuita zvirinani pane zvimwe uye ichi hachisi chimwe kunze kweiyo magetsi. Kusvika pakuti mazuva ano kwaita kufambira mberi kwakakosha kwakazadza nzvimbo dzayo nekutenga kunosvika kupera kwegore. Saka hazvishamise, saka, kuti vamwe vaongorori vezvemari vakurudzira kupinda muzvichengetedzo izvi kuita kuti capital ibatsire mumazuva ekupedzisira egore iri ave kuda kupera.
Kuchengetedzwa kwakadai seEnagás, Iberdrola kana Endesa ndevamwe vevashoma vari kuzviponesa kubva pakutengesa maitiro pamwe neshanduko inofanirwa kuverengerwa seyakanaka zvine mutsindo. Nekudzikisira zvakanyanya kwezuva nezuva, mutoni kusvika pahafu yepesenti, asi zvirinani kuti ivo vari kurasikirwa nemari mukufamba kwekutenga nekutengesa zvikamu. Ndokunge, pakupera kwezuva, ndeipi mari yekudyara mumari iri pamusoro. Uye zvakare, pamazuva aya inopararira pakati pevashandi vayo vane chikamu chakakwirira. Iine yakamisikidzwa uye yakavimbiswa purofiti inofamba mushe inotangira kubva pa5% kusvika pa7%.
Chero zvazvingaitika, hapazove nesarudzo kunze kwekutora nhevedzano yemazano kuitira kuti usabatanidzwe mudambudziko risinganzwisisike pakupera kwegore. Nechinangwa chikuru chekusimbisa zviwanikwa zvemunhu pamusoro pezvimwe zvinhu zvehunyanzvi uye kusvikira zvagonawo kubva pane yakakosha maonero. Izvo zvingave zvinoenderana nemitsara inotevera yezviito iyo yatinokufumura pazasi:
Haisi nguva yakakodzera yekutenga muhomwe uye ndoda zvine hukasha. Zvirinani kumirira uye kuona kuti hukama hwekutengeserana pakati pemacolossi maviri ehupfumi hwenyika hwakamira sei.
Iwe unofanira rega kutora zvinzvimbo mumatunhu anotambura zvakanyanya pamusika wemari panguva ino nekuti kuderera kwavo kunogona kuve kwakanyanya. Iwe unenge uine nguva yekutenga zvikamu zvavo pamutengo unokwikwidza zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi.
La volatility Ichave iri dhinomineta mazuva ano saka haufanire kuvimba nekudzoka kunogadzirwa mumisika yemari. Inogona kuve chirauro kuti iwe upinde uye ubatwe nezvinzvimbo zvavo.
Uye iwe haufanire kukanganwa kuti bhegi rapinda mu rova kubva izvo zvinomutorera mari yakawanda kuti abude. Inogona kugara kwemwedzi, asi pamwe makore mushure mekuwedzera kwakakura kunoenderera gore rimwe nerimwe kubva gore ra2013.
Pachagara paine chokwadi mabhizimusi mikana uye nzira yakanakisa yekutora mukana wavo ndeyekuve wakazara mari kuti uite mipiro yemari yauchapa kubva zvino zvichiita purofiti.
Tiri kutarisana nenguva yakaoma kwazvo mumisika yepasi rese yemasheya inoda varimi vadiki nepakati yakawanda inotonhora ropa uye pamusoro pekuchenjerera kwese. Usapfuurire mberi kwekuvhiya nekuti zvinogona kukubhadharira kusanzwisisika kubva panguva dzino chaidzo.
Kana iwe usina kunyatso kujeka, yakanakisa imwe nzira ndeye siya zvinhu sezvazviri. Iyi haisi nguva yekuyedza mumisika yemari. Uye zvakanyanya kuisa mari yako pasina kufunga nezvazvo nekuti inogona kuunza matambudziko asina basa panguva ino yegore.
Uye pekupedzisira, iwe unofanirwa kuongorora kuti hukama hwekutengeserana pakati penyika mbiri idambudziko rakakomba raunofanirwa kufungisisa nekuti richagadzirisa musika wemasheya, zvirinani munguva pfupi. Beyond mamwe akateedzana ehunyanzvi ekufunga anogona kutanga mune ino nguva. Usakanganwe kubva kune chero chikamu chemazano ekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kushamisika kwekupedzisira kwegore: US-China hukama